March 8, 2018 – Thutastar
ဘုရား ဆွမ်းတော် ကပ်တဲ့ နေရာမှာ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ် အလွဲတစ်ခု
Comments Off on ဘုရား ဆွမ်းတော် ကပ်တဲ့ နေရာမှာ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ် အလွဲတစ်ခု
ဘုရား ဆွမ်းတော် ကပ်လျှင် ဘယ်လိုကပ်ရသလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာအများရဲ့ အလွဲတွေထဲက နောက်ထပ်အလွဲတစ်ခုက ဘုရား ဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးပါ။ ဆွမ်းတော်ကပ်လှူတာကို ပြောတာပါ။ နတ်တင်သလိုမျိုး ဘုရား ဆွမ်းတော် တင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ဆွမ်းတော်ကပ်တာ ဆိုတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘုရားရှင်ကို ရည်ရွယ်အာရုံပြုပြီး ကပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဘုရားက ဘာမှ မပြောဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သလိုလေး တင်သွားတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အချို့ရဲ့ အိမ်မှာဘုရားဆွမ်းတော် ကပ်တာလေးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ထမင်းပန်းကန်လေးပေါ်မှာ သကြားလေးဖြူ၊ ထန်းလျှက်လေးနဲ့ တင်ထားတာကိုပါ။ အိမ်မှာ စားစရာမရှိလို့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဒီသကြား၊ ထန်းလျှက်တွေနဲ့ စားနေရလို့ဆိုရင်တော့ အထူးပြောစရာ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်စားနိုင်တာ၊ ကိုယ်ရှိတာလေးနဲ့ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူထားပြီး ဘုရားရှင်ကိုလည်း မရှိရှိတာ ကပ်တဲ့သဘောပါ။ ခုဟာက အဲလိုမဟုတ်ပါဘူး။ မကပ်နိုင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်တင်းနှီးနှောဖို့ငြင်းပယ်သူမိန်းမကို ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဆိုးရွားစွာရိုက်နှက်
Comments Off on ချစ်တင်းနှီးနှောဖို့ငြင်းပယ်သူမိန်းမကို ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဆိုးရွားစွာရိုက်နှက်
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားနည်းတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ဆိုးသွမ်းသူတွေရဲ့ ပြစ်မှတ်ထားခြင်းခံ နေရပါတယ်။မတရားပြုကျင့်မှု ၊နိုင်ထက်စီးနင်းပြူလုပ်မှု၊ငိုကြွေးဖွယ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှု၊အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ အပါအ၀င် ဆိုးရွားစွာအနိုင်ကျင့်မှုတွေက စာရေးသူတို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေဆဲပါ။လူကျင့်ဝတ်အရ ကိုယ်က ကြင်နာမှုကိုလိုချင်ရင် တစ်ပါးသူကိုလည်း ကြင်နာရမယ် ဆိုတာ လောကအမှန်တရားပါ။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကိုတောင်းတမိရင် အဲ့အရာကိုပဲ တစ်ပါးသူအပေါ် စိတ်ထားဖြူဖြူစင်စင် ထားရမှာပါ။ ယနေ့အခါမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေပါ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တကယ်လို့ စာဖတ်သူအသိုင်းအ၀န်းမှာ ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးရှိရင်တော့ အားနည်းသူဘက်ကနေ ကာကွယ်ပေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ တစ်ယောက်အားနဲ့ကူရင်း အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုလျှော့ကျသွားမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊နှုတ်အားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ အပြုအမှုအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တောင်းတမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေက ရှင်သန်နေဆဲပါ။အဆိုးဆုံးကတော့ အိမ်ထောင်ရေးဆိုပေမယ့် မုဒိန်းကျင့်တဲ့ ပုံစံသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အဆိုးဆုံးအိမ်ထောင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုပါပဲ။ မလေးရှား
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Cele ဖြစ်ချင်လို့ မည်သူနဲ့မဆို အခမဲ့ အတူအိပ်နိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
Comments Off on အွန်လိုင်းပေါ်မှာ Cele ဖြစ်ချင်လို့ မည်သူနဲ့မဆို အခမဲ့ အတူအိပ်နိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ဘလောဂါ မိန်းကလေး တစ်ဦးသည် လူမှု ကွန်ယက်ပေါ်တွင် အခမဲ့ အတူအိပ်နိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။ Qianjin Yeye ဟု အမည်ပေးထားသည့် အကောင့်မှ အခမဲ့ လိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့ပြီး သူမ၏ တည်နေရာကိုပါ post ၌ ထည့်သွင်း၍ အွန်လိုင်းပေါ်တွင် share ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမ လက်ရှိရောက်နေသော နေရာဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဆန်းရကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု၏ အမည်နှင့် အခန်းနံပါတ်တို့ကိုပါ ထည့်သွင်း ရေးသားခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်သည့် Weibo နှင့် WeChat application တို့တွင် “ကျွန်မနဲ့ အခမဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ တစ်ယောက်ယောက်လာပါလား….6316” ဟု
Comments Off on ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ တိုင်ကြားစာပို့သွားမယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ ဒိန်းပိုပိုဒေါင်
ရန်ကုန် ၊ မတ် ၈ ။ ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခံရမှုများကို မရှက်မကြောက်တိုင်ကြားသည့် အမျိုးသမီးများအား ဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်ပေးရန် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အမျိုးသမီးဆယ်ဦးက စာပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စာပေးပို့ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည် မမြတ်နိုးဦး(ခ) ဒိန်းပိုပိုဒေါင်က ပြောသည်။.“မရှက်မကြောက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုင်ကြားလာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ ဥပဒေကြောင်းအရ အကာအကွယ်ပေးရန်များကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု မမြတ်နိုးဦး(ခ) ဒိန်းပိုပိုဒေါင်က ဆိုသည်။ ယနေ့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Orchid ဟော်တယ်၌ ပြုလုပ်သည့် “ကိုးထပ်ကြီးဘုရား ဖြစ်စဉ်မှ နစ်နာမှုများ အပါအ၀င် မြန်မာအမျိုးသမီးများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျူးလွန်ခံရမှုများအကြောင်း” သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၄င်းက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုးထပ်ကြီးဘုရားဗေဒင်ဟောခန်းတွင်အမျိုးသမီးငယ်အများအပြားကို ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပိုမှ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်ရောက်မှုများ
“စနိုက်ကြော်နေတာမှ မဟုတ်တာ သာသာယာယာပဲ” ဆိုပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
Comments Off on “စနိုက်ကြော်နေတာမှ မဟုတ်တာ သာသာယာယာပဲ” ဆိုပြီး တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ဖွေးဖွေး
အနုပညာလောကရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက် ပွဲဦးထွက်ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီကို ဆွတ်ခူးခဲ့သူ ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ သူမကတော့ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီ ဖွေးဖွေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးဟာ ဇာတ်ရုပ်မျိုးစုံကို သဏ္ဍာန်လုပ်သရုပ်တူ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အနုပညာအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တာနဲ့အမျှ သူမဟာ မကြာခဏဆိုသလိုလည်း ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကတော့ သူမရဲ့ ပွဲတက်ဝတ်စုံကိစ္စနဲ့ လူမှုစာမျက်နှာထက်မှာ အတော်လေးဂယက်ထခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ဖက်ရှင်ချစ်မြတ်နိုးသူတွေကြာ အထင်လွဲမှားခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်။ ဖွေးဖွေးဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း သူမရဲ့ fan page နဲ့ Instagram ပေါ်မှာ ရင်ဖွင့်ရေးသားလေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာလည်း ဖွေးဖွေးက သူမရဲ့ ဓာတ်ပုံအောက်မှာ comment
Comments Off on ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ (Top- 10) စာရင်ဝင်နိုင်ငံများ
မုဒိန်းမှု ဟာ လူသားတွေနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်လေ့ရှိတဲံ မှုခင်းတရပ်ဖြစ်ပြီးတော့ ကမ္ဘအရပ်ရပ်ကလည်း အမျိုးသမီး တွေ လုံခြုံရေးအတွက် တင်းကြပ်တဲ့ ပြစ်မှု ဥပဒေတွေ ပြဌာန်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု အဖြစ်များဆုံးဖြစ်တဲ့ 10 နိုင်ငံကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Ethiopia အီသီယိုးပီးယား ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းမှု ဖြစ်ပွားတဲ့ အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ 60 % လောက်ဟာ နှစ်စဉ် လိင်အကြမ်းဖက်ခံနေရတယ်လို့ UN ရဲ့ စစ်တမ်းတွေအရ ဖော်ပြထားပါတယ်။အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုများစွာရှိပြီး အသက် 10 နှစ်လောက်ဆိုရင် ယောင်္ကျားပေးစားရတဲ့အထိ ကြောက်မက်ဖွယ် လိင်အကြမ်းဖက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Sri Lanka သီရိလင်္ကာ ဟာ ပြည်တွင်းနဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတွေကို လိင်အကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားအရ ယောင်္ကျား 14.5% ဟာ အကြမ်းဖက်မှုကိုပြုလုပ်နေကြပြီး
ဖခင်မှ ၁၃နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှု မန္တလေးတွင် ဖြစ်ပွား
Comments Off on ဖခင်မှ ၁၃နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှု မန္တလေးတွင် ဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မူမြို့သစ်အတွင်း အေးမေတ္တာလမ်းကြား ၅၆×၅၇ ကြား ဒူးကြားလမ်းပေါ် ကျူးမြေကွက် (ဆ) ရပ်ကွက်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ ၁၃ နှစ်အရွယ် သမီးအရင်းအား သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှု မတ် ၇ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ တရားလိုနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်—–မှ အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ ဒေါ်——နှင့်အတူ နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် သမီးဖြစ်သူ မ——(၁၃)နှစ်သမီးလေးအား ဖခင်ဖြစ်သူ ဦး– အသက်(၄၀)နှစ်က အိမ်နောက်ဖေး ဝိုင်းကွက်အတွင်းရှိ ခြုံပုတ်ထဲသို့ခေါ်၍ဝင်သွားကြောင်း သိရှိရဖြင့် တရားလိုဒေါ် –နှင့် အိမ်နီးချင်း ဒေါ်–တို့ နှစ်ဦးအတူ သွားကြည်ရှုခဲ့ပြီး သမီးဖြစ်သူကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ရာ ခြုံပုတ်အတွင်းမှ မ——နှင့် ခင်ပွန်း ဦး–တို့အတူ ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ ယင်းနောက် “ခြုံပုတ်ထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ”ဟု သမီးကိုမေးမြန်းရာ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦး–မှ ၎င်း၏
တစ်နာရီအတွင်းမှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ချစ်တင်းနှောမိရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ
Comments Off on တစ်နာရီအတွင်းမှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ချစ်တင်းနှောမိရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ
အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်မယ့်သူကလွဲရင် လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ။ မှန်ကန် တဲ့ အစားအသောက် တွေ စားသုံးခြင်းက စလို့ သေချာတဲ့ Positionတွေ အသုံးပြုခြင်းအထိ နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး ကို အသုံးပြုပြီး ဇနီးမောင်နှံ တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေး ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒါဟာ သိပ်တော့မထိရောက်လှပါဘူး။ ကလေး ရယူဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် ကလေးရစေနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းကတော့ အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ သုတ်ပိုး အားကောင်းလာပြီး မျိုးပွားနိုင်နှုန်း မြင့်မား လာသည်အထိ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လန်ဒန်မြို့က North Middlesex ဆေးရုံက သုတေသနအသစ်တစ်ခု က ဆွေးနွေးတင်ပြလာတာကတော့
Comments Off on ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, RETARD, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား
ကိုယ်သောက်နေကျ ဆေးတွေရဲ့ နာမည်ကို ဂရုစိုက် ဖတ်ဖူးပါသလား? တချို့ဆေးတွေရဲ့ နာမည်အဆုံးမှာ MR, SR, OD, CR, Retard, XL စသဖြင့် ရှိတာကို သတိထားမိပါသလား? လူအများစု ဆေးတွေကို ခြမ်းပြီး ချိုးပြီး သောက်တာမျိုး ရှိဖူးမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ ဆေးဆိုင်မှာ ဝယ်တဲ့အခါမှာလဲ ကိုယ်သောက်နေကျ ပမာဏ mg ပစ္စည်း ကုန်နေတာမျိုးကြုံရင် ဥပမာ ကိုယ်က ၁၀၀မီလီဂရမ် သောက်နေကျ ပေမယ့် ဆေးက မရှိတဲ့အတွက် ၅၀ မီလီဂရမ် ၂ လုံး သောက်လိုက်တာမျိုး ၂၀၀ မီလီဂရမ်ကို တဝက်ခြမ်း သောက်လိုက်တာမျိုး ဆေးဆိုင်တွေကလဲ ၁၀၀ မီလီဂရမ် ပစ္စည်းပြတ်လို့ ၅၀ မီလီဂရမ် ၂ လုံး သောက်လိုက်ပါ
ငွေကျပ် သိန်းလေးထောင်ကျော် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစု
Comments Off on ငွေကျပ် သိန်းလေးထောင်ကျော် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစု